Filohan’ny Fimafama – Ambatondrazaka : efa maty voatifitra, mbola notapahina telo ny vatany | NewsMada
Filohan’ny Fimafama – Ambatondrazaka : efa maty voatifitra, mbola notapahina telo ny vatany
Par Taratra sur 16/02/2018
Filohan’ny Fikambanana mametraka fandriampahalemana maharitra (Fimafama) any Ambatondrazaka Itpkl Radiarifena Germain. Maty notifirin’ireo jiolahy niditra an-keriny tao an-tanony izy, ny alin’ny 6 febroary teo. Tsy vitan’izay, mbola notapahin’ireto farany ka nizara telo indray ny vatany avy eo.
Vonoan’olona mahatsiravina nitranga tany Andrangorina ity, efa tsy lavitra ny alan’i Zahamena, kaominina Ambohidava, distrikan’Ambatondrazaka. Niditra an-keriny tao an-tokantranon-dRadiarifena Germain, filohan’ny Fikambanana mametraka fandriampahalemana maharitra na Fimafama, ny jiolahy nirongo fiadiana ny alin’ny talata 6 febroary teo. Nitaky vola tamin-dramatoa vadin’ny tompon-trano ireo olon-dratsy. Nilaza ho tsy nanana izy io. ”Ny hamono ny vadinao koa anie no tena anton-dianay e”, hoy ireo olon-dratsy. ”Aza vonoina aho fa ireo ny omby raha hoentinareo”, hoy ilay rangahy tompon-trano.
Tifitra ny setrin’izany na nitalaho aza ity farany. Tsy nijanona teo ny habibiana fa notapahin’ireo jiolahy telo ny vatany: nokapaina teo amin’ny tendany sy feny izy io.
Rehefa vita izany, lasa ireo olon-dratsy tsy nisy nanakantsakana. Efa lasa elaela izy ireo vao tonga ny zandary nanao ny fanadihadiana.
Tsy nisy tratra ireo jiolahy na iray aza. Voalaza fa ny hamono ity filohana fikambanana ity mihitsy ny anton-dian’izy ireo fa tsy ny handroba velively. Efa nanao vava rahateo ireo olon-dratsy ireo fa hamono azy io. Ity filohana fikambanana ity izay nalaza tamin’ny fahaizana nandrindra ny ady amin’ny asan-dahalo any an-toerana. Maromaro ny asan-dahalo voasoroka sy omby tafaverina noho ny asa nataon’ny fikambanana. Tsy mahagaga raha tonga ireo jiolahy namono azy ity, ary izao novonoina tamin’ny fomba feno habibiana izao.
Hanohy ny asa ny fikambanana
Na eo aza ny fahafatesan’ny fikambanana Fimafama, milaza ny hanohy ny ezaka efa nataony ny mpikambana amin’ny ady amin’ny asan-jiolahy. ”Hifamory tsy ho ela izahay akanga sisa nanamborana hanao izay hitohizan’ny tolona”, hoy Rakotoarivelo Victor, sekretera jeneralin’ny Fimafima, izay nanome ny vaovao.
Mahafantatra na misy mpikambana ao amin’ny Fimafama ny tanàna maro manodidina an’Alaotra satria tsy indray mandeha no tafaverina amin’ny tompony ny omby very noho ny fahaizan’ny filoha nisy namono raha ny fanangom-baovao. Omby very tao akaikin’Ambatondrazaka tany Ambakireny (Tsaratanana) no hita. Araka izany, hitohy ny ady amin’ny asan-dahalo any an-toerana. Mihevitra ny handemy ny sain’ny olona ireo olon-dratsy kanefa tsy nampihemotra ny fikambanana izany. Mandray an-tanana ilay vonoan’olona ny zandarimaria.
Rarivo sy Yves S.